Abakwa-LG baqala umugqa omusha wamabha womsindo ngokusekelwa kwe-AirPlay 2 | Izindaba ze-IPhone
I-LG yethula umugqa omusha wama-soundbars ngokuxhaswa kwe-AirPlay 2
UKarim Hmeidan | 07/04/2021 14:00 | Izaziso
Izolo sikutshele ngemibono yethu yokuqala yalokhu okusha ilungu lomndeni wakwaSonos, iSonos Roam, isipikha esisha esiphathekayo kusuka kusiqhwaga sesipikha. Vele, akuyona yonke into ezoba yi-Sonos, sithanda nokuthola ukuthi imiphi eminye imikhiqizo esilethela yona futhi izindaba zanamuhla zihlobene nenye inkampani ezinikele ekwenzeni izipikha. Abakwa-LG bethule uhla olusha lwama-soundbars lwango-2021 futhi bafika ngokuxhaswa (ngandlela thile) kwe-AirPlay 2. Qhubeka ufunde ukuthi sikunikeza yonke imininingwane.
Bakumemezele ngokukhishwa kwabezindaba: Yonke imigoqo yemisindo ye-LG ngo-2021 izobe ihambisana ne-Apple's 2. Lokhu kuzophinda kusekele amafomethi womsindo ozungezile I-Dolby Atmos ne-DTS: X, amazinga amakhulu womsindo we-hi-fi. Okuthile esikubonayo kweminye imikhiqizo futhi okufika nakulemigoqo yomsindo yi ukulinganiswa kwesipikha kususelwa egumbini, okungukuthi, izosebenzisa imakrofoni ukuvumelanisa umsindo nendawo esihlala kuyo. Ukwengeza konke, amamodeli aphezulu azoqinisekiswa ngokudlala kwe-Hi-Res Audio okungalahleki okungama-24-bit / 96kHz.
Njengoba wazi, i-AirPlay 2 isivumela imisebenzi emisha maqondana nenguqulo yayo yangaphambilini. Kumele kushiwo ukuthi le-AirPlay 2 ibinathi kusukela ngo-2018 kepha abakhiqizi baye bephuza ukwamukela uhlelo olusha lwe-Apple lokuxhumana. Ngabe i-AirPlay 2 isivumela ini? siyabolas dala uhlelo lomculo olunama-multiroomokungukuthi, singakhetha amadivayisi amaningi we-AirPlay ukuze kudlalwe umculo ofanayo phakathi kwawo wonke, noma uhluke. Kube njalo imikhiqizo eminingi yesipikha yethulwe ukuxhasa i-AirPlay 2, futhi njengoba sikutshela, i-AirPlay 2 isivele iyahambisana nobubanzi bemisindo ye-LG ka-2021. Nawe, Ucabanga ukuthola ibha yomsindo yohlelo lwakho lwe-multimedia? Ingabe usebenzisa i-AirPlay ukudlala umculo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » I-LG yethula umugqa omusha wama-soundbars ngokuxhaswa kwe-AirPlay 2
I-Apple ivala ngokuzithandela wonke ama-Apple Stores eFrance
Izinselelo ezimbili ezintsha ezilungele abasebenzisi be-Apple Watch: Usuku Lomhlaba kanye Nosuku Lomdanso Wamazwe Omhlaba